“”မိုးသည်းည သန်းခေါင်ယံ လေးနာရီတိတိအကြာ လျှပ်စီးတစ်ချက်နှင့် စိတ်နာမ်တစ်ခု ရွေ့လျားခြင်း”” | ဥက္ကာကိုကို
“”မိုးသည်းည သန်းခေါင်ယံ လေးနာရီတိတိအကြာ လျှပ်စီးတစ်ချက်နှင့် စိတ်နာမ်တစ်ခု ရွေ့လျားခြင်း””	Posted by oakkarkoko on August 6, 2012
Posted in: အက်ဆေး, ၀တ္ထု.	1 Comment
ပူလောင်မှုနှင့်အတူ လေးလံနေသည့် စိတ်ထုထည်က ကိုယ်တွင်းကိုယ်ပ သောကမီးအဖြစ် ကူးပြောင်းလာ သည်။ သောကြာနေ့ည။ သန်းခေါင်မတိုင်မီ လေးနာရီအလို။ နောက်ဆုံးကြားခဲ့ရသည့် မြန်မာ့အသံရေဒီယိုမှ အချိန်ကြေငြာသံက အက်ရှရှ။
ထိုသောကြာနေ့က ကျနော့်ကို ခြောက်ခြားစေခဲ့သည်မှာ သိပ်တော့မဆန်းလှပါ။ ထိုခြောက်ခြားမှုသည် သံသရာ အထိ မပါစေဖို့သာ ဆုတောင်းခဲ့ပါသည်။
ဘီယာတစ်ခွက်ကို မော့သောက်ရင်း စောင်းကျလာသည့် ဖန်ခွက်ကြားမှ အကြည့်ရိုင်းရိုင်းတစ်စုံကိုတော့ အမှတ် ရရရှိနေခဲ့သည်။ ကျိန်းသေသည်။
အဲဒီလူရဲ့ ဖန်ခွက်ကြားက အကြည့်ရိုင်း။ ကျနော့်စိတ်တွေ တဖျောက်ဖျောက် ခုန်နေသည်။ ကျနော့်အသားတွေ တဆတ်ဆတ် တုန်နေသည်။
ဆောက်တည်ရာမဲ့ အတွင်းစိတ်ကို အံ့ကြိတ်မျိုသိပ်ရင်း စားပွဲခုံကို တဒေါက်ဒေါက် ခေါက်နေမိသည်။ ဘာလိုနေ ပါလိမ့်။ တစ်ခုခုတော့ တစ်ခုခုပဲ။
လေးလံမှုက တဖြည်းဖြည်း ကြီးထွားလာနေပြီ။ တင်းကျပ်နေသည့် လည်ချောင်းဝက လေပူများ လမ်းပေါ် အန် ထွက်သွားသည်။ မျက်လုံးထဲမှာ မြင်မြင်သမျှ အနီရဲရဲ။ ဒီမိုကရေစီတဲ့လား။ အသည်းကြားက မဲတစ်ပြားတဲ့လား။
ပြောင်းလဲမှုတဲ့လား။ ငြိမ်းချမ်းရေးတဲ့လား။ ချိုးငှက်တွေ မျိုးတုန်းနေပြီ။
“”ဒေါက်….. ဒေါက်…… ဒေါက်””
သေမင်း၏ တံခါးပေါက်ကို ကျနော် ခေါက်လိုက်သည်။ ခုလောက်ဆို…. သူ အိပ်ပျော်နေရော့မည်။
9:00 PM ဘီယာခွက်ကြားမှ ခပ်ရိုင်းရိုင်းကြည့်တတ်သည့် အမျိုးကောင်းသားက လေချဉ်တစ်ချက် ဂေ့ခနဲမြည်ရင်း လက် ညိုးတစ်ချောင်းကို ရှေ့တိုးနောက်ငင် ထောင်ပြသည်။ သူတစ်ခုခု ပြောချင်နေတာ ဖြစ်မှာဘဲ။ ကျနော့်နားရွက်ကို သူ့ဖက်သို့ ခပ်ကျယ်ကျယ် ဟပေးထားလိုက်၏။
“”မင်း….. သိလား….. လောကကြီးမှာ…….””
အကြည့်ရိုင်းရိုင်းတွေ ပစ်လွှတ်တတ်သည့် မျက်လုံးဝါတစ်စုံက ဖတ်ခနဲ ဆွဲစေ့သွားသည်။ ထို့နောက် ထိုလူ၏ အကြည့်မပါ သော ခေါင်းစုတ်ဖွားကြီးက အလမ္မာယ်ဆရာရှေ့မှ မြွေဟောက်တစ်ကောင်လို ဘယ်ညာယိမ်းနွဲ့လျှက်ရှိလေသည်။
ထိုခေါင်းစုတ်ဖွားထံမှ ပါးစပ်တစ်ပေါက် ထပ်ပွင့်လာသည်။
“”မင်း…. သိလား….. လောကကြီးမှာ…..””
ဆက်၍တဖန် ဘယ်မှ ညာသို့ ဘယ်ညာ ဘယ်ညာ ယိမ်းထိုးပြန်သည်။
ပါဖောင့်မဲန့်ပြနေတာ ဖြစ်မှာပါ ဟု မျက်တောင်မခတ် လိုက်ကြည့်ပေးနေမိ၏။ ပူလောင်မှုနှင့်အတူ စိတ်တွေလေး လံလာပြန်သည်။ ဒီအချိန်ဆို… သူ… အိပ်ပျော်နေရော့မှာဘဲ။
ခေါင်းစုတ်ဖွားကြီး အကြည့်လည်းမပါဘဲ စားပွဲခုံပေါ်သို့ ဦးခိုက်သွားသည်။ အင်း…. သူ့ပါဖောင့်မဲန့်ပြီးပြီထင် တယ်။
၀န်ဆောင်မှုကောင်းပုံရသည့် အပြုံးအေးအေးဖြင့် ကောင်လေးတစ်ယောက် ခေါင်းငုံ့ရင်း စကားဆိုသည်။
“”အင်း… ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် ပန်ကာဆယ်လုံး၊ အဲယားကွန်းသုံးလုံးနဲ့ ပြတင်းပေါက် အချပ်နှစ်ဆယ်လောက် တပြိုင်တည်းဖွင့်ပေးစေချင်တယ်””
ခေါင်းကို တဗျင်းဗျင်းကုတ်ရင်း အထူးအဆန်းအကြည့်များဖြင့် ကပိုကရို ပြန်ထွက်သွားသည်။
တောက်….. သောကမီးတွေ လောင်ပြန်ပြီ။
နှာခေါင်းဝမှာ ငါးကင်နံ့တွေ လှိုင်နေသည်။ ခပ်ရိုးရိုးလည်း တွေးမိသည်။ ဒါက ရေချိုငါး။ မီးနဲ့ကင်နေတာ.. ဘာညာပေါ့။ တွေးရင်းနဲ့ပင် ၀မ်းဗိုက်က နာလာသည်။ အစာဟောင်းစွန့်ချင်လို့များလား ဟု တွေးမိသဖြင့် ဆန်းစစ်ကြည့်ရ သည်။ ပြီးမှ အစာသစ်လက်ခံလို၍ ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။
ခဏခဏ လက်ခံရရှိခဲ့သော ခြိမ်းခြောက်စကားတစ်ခွန်းကို ပြန်ကြားယောင်မိသည်။ ကျန်ာကတော့ ထိုစကားကို ခြိမ်းခြောက်တယ်မမြင်ပါဘဲ စေတနာစကားလို့သာ မှတ်ယူခဲ့သည်။ အခုတော့ စေတနာတွေ ရောင်ပြန်ဟပ်ချေပြီ။ ဗိုက်….. ဆာ…… သည်။
“”ထမင်းဝအောင်မစားလျှင် ဗိုက်ဆာတတ်သည်”” ။
“”ဒီမှာ ၀ိုင်ဖိုင်မိတယ်နော်… ဆရာ””
မော့ကြည့်လိုက်တော့ ၀န်ဆောင်မှုကောင်းပုံဆက်ရနေသည့် ကိုးနာရီခွဲက ကောင်လေးကို ရိုရိုကျိုးကျိုးတွေ့ရသည်။ မျက်ခုံးကို အထက်သို့ ဆွဲလှန်ပြလိုက်တော့ သူက ဆက်ပြောသည်။
“”ဆရာ့အနေနဲ့ အင်တာနက် ခဏလောက်အသုံးပြုလိုက်မှ နေသာထိုင်သာ ရှိမယ်လို့ ထင်ရလို့ပါ””
ကျနော် သူ့ကို မကြည့်ဘဲ လက်ညိုးတစ်ချောင်းကိုသာ ထောင်ပြလိုက်ပြီး “”WHY”” ဟု ရှည်လျားစွာမေးမြန်းလိုက်၏။
“”သိသာနေပါတယ်ဆရာရယ်။ ဆရာ့လက်နှစ်ဖက်စလုံးက အငြိမ်မှမနေဘဲ။ လက်ဆယ်ချောင်းစလုံးက စားပွဲခုံ ကို ခပ်မြန်မြန်ခေါက်နေတာကို ကျနော်မြင်နေရတယ်။ ဒါဟာ အင်တာနက်စွဲသူတွေ ဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ ရောဂါပဲလေ””
သူ့အပြောကို ကျနော် ရှည်လျားစွာ ၀န်ခံလိုက်၏
ထို့နောက် သက်ပြင်းတိုကလေးတစ်ခုကို ဖိုသီဖတ်သီ မှုတ်ထုတ်ကာ ကောင်လေးကို ရှင်းပြရသည်။
“”တချိန်တုန်းက အွန်လိုင်းဆိုတာ ငါ့ရဲ့ စံဗိမာန်ကြီးပေါ့ကွာ။ အဲဒီစံဗိမာန်ကြီးကပဲ အခုတော့ ငါ့ရဲ့ ဂူဗိမာန် ဖြစ် သွားခဲ့တာလေ….””
ကောင်လေးက မတ်တပ်ရပ်သည့်အလုပ်နှင့် ခေါင်းညိတ်သည့်အလုပ်ကို တွဲလုပ်ပြသည်။ သူ့နှုတ်ခမ်းတွေ ခပ် ကွေးကွေးဖြစ်သွားတာကိုလည်း ကျနော့်မျက်ဝန်းထောင့်က ဖတ်ခနဲဖမ်းမိလိုက်သည်။ မေးခွန်းတစ်ခု ထုတ်မိ၏။ ဘာရယ် မဟုတ်။
“”ဒါနဲ့…. မင်း.. အွန်လိုင်းသုံးသလား””
“”ဟုတ်ကဲ့…. နည်းနည်းတော့ သုံးဖြစ်ပါတယ်… အဘ…””
ကျနော် မျက်မှောင်ကုတ်ပြီး ခပ်တွေတွေ ဖြစ်သွားတာကို ကောင်လေးက ခစ်ခနဲရယ်သည်။
“”ဆရာက အဘ ဆိုတာကို ဆိုင်ထဲဝင်လာကတည်းက ကျနော်သိပါတယ်””
သက်ပြင်းတစ်ချက်ကို ထစ်ထစ်ငေါ့ငေါ့ ချလိုက်မိသည်။
ဗလတောင့်သော်လည်း မျက်နှာက ပေါတောတောပုံပေါက်နေသည့် လူနှစ်ဦးဝင်လာသည်။ ရှေ့က ခုံပေါ်ခေါင်း အပ်ပြီး စည်းစိမ်ယစ်နေသည့် ခေါင်းစုတ်ဖွားကြီးကို လက်တစ်ဖက်တစ်ချက်က မယူကာ တွဲထုတ်သွားကြသည်။
၀ူး… ခနဲ ကားမောင်းထွက်သွားသံအပြီးမှာ ၀န်းကျင်တစ်ခုလုံး ဆိတ်ငြိမ်သွားသည်။ အေးချမ်းလိုက်တာ။
စစ်ခနဲ ထိုးအောင့်လာသည့် ၀မ်းဗိုက်ညာဖက်ထောင့် နံရိုးအောက်ကို လက်ဖြင့် အုပ်ထားမိသည်။
အဲဒါက တစ်လျှောက်လုံး ပြောလာခဲ့တဲ့စကား။ အခု ဒီစကားကို နှုတ်ကထွက်ဖို့ ဆွံ့အနေသည်။ မြန်သည်။ လွယ်သည်။ ပြီးတော့လည်း….. ကုန်ပြန်ပြီ။ အချိန်။
ကျနော် မတောင့်ထားနိုင်တော့ဘူး မခရေ…
ကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာ ကျနော်ဟာ မကောင်းဆိုးဝါးပဲ
ဘယ်အိမ်ကများ တံခါးဖွင့်ပြီး လက်ခံကြမှာလဲ။
ကျနော့် တောင့်မထားနိုင်တော့ဘူး… မခရေ…
သိပ်ချစ်တဲ့ ယုန်လေးကို တကယ်ချစ်ကြောင်း ပြောပေးပါ
ဒါပေမယ့်… ယုန်တွေက ဖုန်းမှ မကိုင်တတ်တာလေ။
ကျနော် ဘယ်လိုမှ တောင့်မထားနိုင်တော့ဘူး မခရေ…
သွားရမယ်.. သွားတော့မယ်… သေချာတယ်…
ခင်ဝမ်းရဲ့ နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်.. သီချင်းကို
နှုတ်မဆက်ခင် နှုတ်ဆက် ဆိုညည်းပါရစေ…
ကမ္ဘာနဲ့ ချီပြီး တောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်… မခရေ…။
ဆိုင်အပြင်မှာ မိုးတွေရွာလာသည်။ ခပ်ဖွဲဖွဲကနေ တသည်းသည်း တမဲမဲ။ အပြင်လမ်းပေါ်မှာ လူအသွားအလာ ကျဲကျဲတဲတဲ။ အဖြစ်အပျက်များက သဲကွဲမှုမရှိခဲ့ပေ။ မြန်ဆန်လွန်းသည့် တခဏအတွင်းမှာ ကမ္ဘာကြီးဟာ သွက်လက် ပေါ့ပါးသွားခဲ့ပြီ။
သမားရိုးကျ ဂီတတော့ မဟုတ်ပါ။ ရဲတွေကတော့ “”သွေးရိုးသားရိုးပါ”” ဟု မှတ်ချက်ပေးကြသည်။ ထို့ကြောင့် သတင်းဌာနများကလည်း သွေးရိုးသားရိုးဟုသာ ဖော်ပြကြလိမ့်မည်။ သမားရိုးကျဂီတတော့ လုံးဝကို မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။
အကျွန်ုပ်ကို စစ်ကြော၍ အကျွန်ုပ်၏ နှလုံးကို သိမှတ်တော်မူပါ။
စုံစမ်း၍ စိတ်အထင်များကိုလည်း သိမှတ်တော်မူပါ။
ဆိုးသောလမ်းသို့ အကျွန်ုပ်လိုက်သည် မလိုသည်ကို ကြည့်ရှု၍
သောကြာနေ့ကို ကျော်လွန်ပြီး နာရီဝက်ခန့်အကြာ ပစ္စုပ္ပန်။
ပြီးခဲ့သည့် ၁၂ နာရီတိတိက သေဆုံးသွားခဲ့သည့် ရုပ်အလောင်းနှင့် ခေတ္တမျှ စကားစမြည်ပြောဆိုခဲ့ရသည့် စားပွဲထိုးလူငယ်မှာ ဆိုင်အတွင်း ခေါက်တုံ့ခေါက်ပြန်လျှောက်ရင်း စိတ်လှုပ်ရှားလျှက်ရှိသည်။
အပြင်မှာ လျှပ်စီးတွေ ဖြိုးဖြိုးဖျတ်ဖျတ် လက်နေ၏။ မိုးချိန်းသံကိုကား မကြားရ။
လူငယ်က သူ့ကိုယ်သူ ပြန်မေးခဲ့သည်။ ထို့နောက် သူ့လက်ဖ၀ါးနှစ်ဖက်ကို ပွတ်ချေနေခဲ့သည်။ သူ့နားထဲမှာ အသံ တစ်သံကို ရှင်းလင်းပီသစွာ ကြားနေရသည်။ အသံက တိုးသွားလိုက်၊ ကျယ်လာလိုက်…။ ထပ်ခါ…. ထပ်ခါ……………။
“”အချိန်….. မရ…… ဘူး…….””
၀ရုန်းသုန်းကားဖြင့် ကောင်တာနောက်သို့ လူငယ် ပြေးဝင်သွားသည်။ ကောင်တာအံဆွဲကိုဖွင့်ပြီး အထဲမှ လက်ပ်တော့ပ် တစ်လုံးကို ထုတ်သည်။
ထို့နောက်.. Facebook ကို ၀င်သည်။ ထို့နောက်တော့….. ကီးဘုတ်ခလုတ်နှိပ်သံ ကိုးချက်တိတိ။
← လူငယ်တစ်ဦးရဲ့ လွဲမှားခြင်း ဒဏ္ဍာရီ(၁)	မီဒီယာနှင့် ဖင်ကိစ္စ →	One comment on ““”မိုးသည်းည သန်းခေါင်ယံ လေးနာရီတိတိအကြာ လျှပ်စီးတစ်ချက်နှင့် စိတ်နာမ်တစ်ခု ရွေ့လျားခြင်း”””
Anonymous on February 1, 2013 at 2:06 pm said: